ifama yeholide elungele abantwana kuLwandle lweBaltic
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHelge
UHelge unezimvo eziyi-568 zezinye iindawo.
Indawo yeholide "yeStorch" ifanelekile kubantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2 okanye abantu abadala aba-4. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela, igumbi lokulala (ibhedi ephindwe kabini, oomatrasi aba-2 90cmx200cm), ikhitshi kunye neshawari / indlu yangasese. Kwi-attic enye igumbi lokulala elineebhedi ezimbini ezingatshatanga (90cm x 200cm) kunye nendawo yokudlala eyahlukileyo enebhodi yokudlala ye-BRIO-BAHN.
Ngaphambi kwendlu kukho i-terrace egqunyiweyo kunye netafile yokutya kunye ne-sandpit enkulu phantsi kophahla.
Iyadi yindawo entle enendawo eninzi, imbali, iimoto ezininzi ezinyovwayo zabantwana, indawo yokujingi yeentaka enkulu, isilayidi kunye nesiza somlilo. "I-Beach of the Horizons" eDahme yimizuzu nje embalwa kude. Kukho amathuba amahle okuthenga kwindawo, ukusuka kwivenkile yefama yeDEMETER ukuya kwisaphulelo.
Umbuki zindwendwe ngu- Helge
Singabamkeli ngokomsebenzi nangokwentliziyo, ngoko ke sikhona ngenxa yakho njengoko unqwenela, kodwa ngokuqinisekileyo siyayihlonipha imfihlo yakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Grube